Ampidino qBittorrent ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (17.80 MB)
Ny safidy uTorrent dia mpanjifa torrent kely sy tsotra izay afaka miasa aminny sehatra rehetra. Azonao atao ny mamorona sy mizara ny rakitrao falehan-driaka, manaraka ireo tranonkala tianao lavitra noho ny fanohananny RSS, ary mangataka ny valinny atiny tadiavinao ao aminireo tranokala falehan-driaka malaza noho ny fisehoana fikarohana tsotra. Ary afaka manomboka misintona ny fisie aminny tsindry iray ianao. Aminny alàlanny fanokafana fidirana lavitra dia afaka mifandray aminny solosainao sy ny programa falehan-driaka ianao na aiza na aiza misy anao aminny alàlanny interface web. Eo ambany fahefanao ny zava-drehetra.
Izy io dia manohana kinova Windows 2000 / XP / Vista / 7.
Izy io dia manohana fiteny 20+ ao anatinizany ny Tiorka. Napetraka miaraka aminny teny anglisy aminny toerana misy anao. Ho anny fampiasana Tiorka dia ovao fotsiny ny safidinny fiteny aminny teny tiorka avy aminny kiheba.
Ampy izay ny manoratra ny anaranny fisie izay tadiavinao ao aminilay fizarana fikarohana efa nahazatra anay. Mikaroka ireo tranokala falehan-driaka voasoratra anarana rehetra izy ary mampahafantatra anao rehefa vita ny fizotrany.
Mihazakazaka tsara aminny Linux, Mac, Windows, rafitra BSD Maimaimpoana.
Misaotra ny fametrahana ny fifandraisana lavitra, mamela ny fidirana lavitra na dia tsy eo aminny solosainao aza ianao. Mila mampihetsika ny kiheba UI Web ianao ao aminny faritra fizarana.
Ny programa, izay mampiasa ny interface Qt voaomana aminny fiteny C ++ ary tohananny trano famakiam-boky Python, dia miasa ihany koa miaraka aminny interface KDE.
Fanohanana RSS nohatsaraina.
Haben'ny rakitra: 17.80 MB